I-04 / 01 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: Januwari 4, 2020
Imali ye-ISPARK inyuke ngo-2020?
Izimali zokupaka i-ARKarkark kuMasipala wase-Istanbul Metropolitan zenyuselwe kumaphesenti angama-40. Izakhamizi zisabele lapho zidonswa khona ngesinqumo esathathwa emihlanganweni yephalamende yangoDisemba 2019 e-IMM. esidlule [Okuningi ...]
Umkhankaso weGoodness Piano esiteshini sase-Üsküdar Metro Station
Umbutho wokuncoma uqalile kulayini we-Üsküdar - Çekmeköy. Umculi uBarutay Kartal udlala upiyano esiteshini sase-Üsküdar ukusiza izingane zasemgwaqweni. Ukusebenza Njengochwepheshe Wokuqeqeshwa Kwezemidlalo eMnyangweni Wezentsha Nezemidlalo [Okuningi ...]
Amatekisi eTrabzon abuyele eTekisini
Ukuhlolwa kwezinkinga zeTrabzon, umhlangano ubusekhaleni le-dolmuş yesimanje. U-Hmer Hakan Usta, uMongameli weChamber of Abashayeli Nezimoto, uthe bakholwa ukuthi abantu baseTrabzon nabathengisi bezitolo bazokujabulela ukuguqulwa kwalolu hlelo. [Okuningi ...]
IParkomats Yokuqala Yabesifazane iqale ukusebenza e-Eskişehir
Ekuqaleni kukaDisemba, ama-parkomats okuqala abesifazane aqala ukusebenza kuMasipala wase-Eskişehir Metropolitan, omemezele ukuthi bazoqasha izikhulu zabesifazane abasebenza ngamapaki lapho isimemezelo simenyezelwe kuma-akhawunti abo ezinkundla zokuxhumana. Uqale ukusebenza kuMahmut Pehlivan Street eKızılcıklı ezinsukwini zokuqala. [Okuningi ...]
Isiteshi Sesithathu Sifinyelelwe kuNarlıdere Subway
UFahrettin Altay - Umshini wokwakha umugqa wethayela lomgwaqo we-Narlıdere wafika esiteshini sesithathu. Izmir Metropolitan UMasipala Wesistimu Yesitimela, iBornova Evka 3 - Fahrettin Altay metro line Narlıdere'ye [Okuningi ...]
ICengiz Ukwakhiwa Kwakhiwa kukajantshi weSitimela we-2.7 Billion TL eCroatia
ICengiz Construction izokwakha ujantshi wesitimela ongamakhilogremu angama-2.7 eCroatia: Umlobi wephephandaba laseDünya uKerim Ülker wabhala ikholomu yakhe enesihloko esithi "UCengiz uzokwakha ujantshi ongamakhilogremu angama-2.7 eCroatia!" Nayi imininingwane yendatshana; theku [Okuningi ...]
UMisra Oz Sel olahlekelwe yindodana yakhe enhlekeleleni yesitimela eCorlu uvule uphenyo ezimbili
UMısra Öz Sel, olahlekelwe yindodana yakhe u-Oğuz Arda Sel ngesikhathi senhlekelele yesitimela e-Çorlu mhlaka 8 Julayi 2018, umemezele ukuthi kuvulwe amacala amabili aphathelene naye ngokuthuka uMongameli kanye nenkantolo. ICorlu isifunda saseTekirdag [Okuningi ...]
Kuvulwe amaLayini ama-IETT amasha e-Istanbul
I-IETT ivule imigqa emisha engama-34, engama-15 yayo esehlangothini lwaseYurophu kanti ayi-49 asohlangothini lwe-Anatolian, ukufeza izidingo zokuhamba zezakhamizi zase-Istanbul. I-IETT ihlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuhamba ezikhululekile kubahlali base-Istanbul. Ezokuhamba eziya eMarmaray [Okuningi ...]
Izindaba Ezinhle Zokuhambisa! Digital Tachograph Isicelo Sithunyelwe
UMnyango Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda umemezele ukuthi ukusetshenziswa kwe-tachograph yedijithali kuhlehliselwe umhlaka 30 kuJuni 2020. Izolo e-Istanbul nase-Ankara emadolobheni amaningi, ikakhulukazi abathutha, uMnyango Wezokuthutha kanye Nezingqalasizinda 'Digital tachograph' olethwe [Okuningi ...]
UMnyango ulungisa ubudlelwane bezokuxhumana nge-Corps Train Accident Trial's neTCDD
Icala lokubulawa kwabantu iCorlu lithe kulandela ukuphendula komnyango lapho kuqhubeka lo mbuzo, ufakazi onguchwepheshe Bekir Binboğa, Sıddık Yarman kanye no-Mustafa Karaşahine 14 bezinkontileka ezihlukene zokubonisana ngezigidi eziyi-1 [Okuningi ...]
Advanced Technology ukuba Ukusheshisa Uguquko Turkey Domestic Car
Bursa ihlelwe Technical University of eTurkey Automobile futhi iphaneli Bursa, isivakashi BCCI Usihlalo Ibrahim Burkay, uthe ukukhiqiza imoto yasekhaya ukuphuthumisa eTurkey medium-high nokuguqulela zobuchwepheshe yokukhiqiza, [Okuningi ...]
Isitaladi i-İzmit Salim Dervişoğlu sizobe sithathe indawo ye-D-100
Umasipala waseKocaeli Metropolitan, osebenzise amaphrojekthi azothuthukisa ukuhamba kwezimoto nokwenza lula ukuthuthwa kwezakhamizi, uvula Izmit Salim Dervişoğlu Street, enwetshelwa emigwaqweni ephindwe kabili engu-2 x 2. Njengendlela eya ku-D-100 Highway [Okuningi ...]
Umasipala wase-İzmir Metropolitan Usungule Indawo Yokupaka Imoto Yezimoto Eziyisikwele
Izmir Metropolitan Municipality, lo ngqa ngokungena ngemvume project nge yokupaka Scrap imoto eyasungulwa ngo Turkey. Indawo yokupaka eM menemen kuzoba yisixazululo senkinga yokuqhekeka kulo lonke idolobha. Izmir Metropolitan Municipality, inolwazi kulo lonke idolobha [Okuningi ...]
Izazi Zengozi Yesitimela se-Trainorlu Zikhokhela 14 Million TL Ngemisebenzi eyi-1 Yezeluleko
Ingozi yesitimela i-ororlu eqokwe njengochwepheshe uchwepheshe uMustafa Karaşahin Sıddık Binboğa Yarman 14 umsebenzi wokubonisana ohlukile woMnyango Wezokuvakasha ubonakale uthole izigidi eziyizinkulungwane ezingama-1 zamaphawundi. Beka ku-Plus iqiniso [Okuningi ...]